ESIBATHANDILE BASILAHLEKELA: Menzi Ngubane (1964-2021) | Scrolla Izindaba
ESIBATHANDILE BASILAHLEKELA: Menzi Ngubane (1964-2021)
Isikhathi esingaphezu kweminyaka engamashumi amathathu, uMenzi Ngubane ubebonakala kumabonakude wakuleli.
Usebenze kuma-soapie amaningi nakumabhayisikobho futhi wazuza iqoqo elihle lemiklomelo.
Umsebenzi wakhe waqala ngowezi-1987 ohlelweni lwenethiwekhi iKwa Khala Nyonini lapho ayedlala khona indima kaCijimbi.
UMzansi uzokhumbula unomphela ubuhlakani bakhe edlala indima kaMazwi kuBambo Lwami.
UNgubane wadlala emidlalweni eminingi ethandwa kakhulu kumabonakude aseNingizimu Afrika, kubalwa iYizo Yizo, i-Gold Diggers, i-Heist, i-Ashes to Ashes, Isibaya, i-How To Steal 2 Million ne-Country of My Skull okulingisa kuyo uSamuel L. Jackson noJuliette Binoche.
Iningi labalandeli limukhumbula kakhulu ngendima kaSibusiso Dlomo yeminyaka eyi-11 kwi-Generations.
Kulo msebenzi wakhe unqobe umklomelo we-Best Actor ngendima ayidlalile kuBambo Lwami kuma-Avanti Awards.
Ngowezi-2007, wanqoba umklomelo we-Best Actor ngendima ayidlalile kwi-Generations neye-Best Actor ku-7de Laan ku-Safta Golden Horn Awards.
UNgubane usebenze ohlelweni lokweluleka olubizwa nge-Twelve Auspicious Gentlemen noMenzi olugxile ekufundiseni abafana abancane nasekulungiseni umthelela odalwe yizinkinga zomphakathi.
Lo mlingisi owazalelwa eMnambithi ube nezinkinga eziningi zokuhluleka ukusebenza kwezinso okuholele ekutheni athole inso anikelwa ngayo, eqinisekise ukuthi uyaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe wokulingisa.
Esitatimendeni umndeni kaNgubane uthe ushone ngoMgqibelo ekuseni ngemuva kokuhlaselwa yisifo sohlangothi.
Ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe uLerato Sedibe namadodakazi amabili uSiya noZiyanda Ngubane.